Amakhukhi afakiwe namakhasi ku- Law & More amawebhusayithi
Ikhukhi yifayili yombhalo elula, encane ebekwa kwikhompyutha yakho, ifoni noma ithebhulethi lapho uvakashela amawebhusayithi Law & More. Amakhukhi afakiwe namakhasi ku- Law & More amawebhusayithi. Imininingwane egcinwe kuyo ingathunyelwa kumaseva ekuhambeleni okulandelayo kwewebhusayithi. Lokhu kuvumela iwebhusayithi ukuthi ikubone, ngokungathi kunjalo, ngesikhathi sokuvakasha okulandelayo. Umsebenzi obaluleke kakhulu wekhukhi ukuhlukanisa isivakashi esisodwa kwesinye. Ngakho-ke, amakhukhi asetshenziswa kakhulu kumawebhusayithi lapho kufanele ungene khona. Isibonelo, ikhukhi iqinisekisa ukuthi uhlala ungene ngemvume lapho usebenzisa iwebhusayithi. Ungenqaba ukusetshenziswa kwamakhukhi nganoma yisiphi isikhathi, noma lokhu kunganciphisa ukusebenza nokusebenziseka kalula kwewebhusayithi.
Law & More isebenzisa amakhukhi asebenzayo. Lawa makhukhi abekwe futhi azibandakanye yiwebhusayithi uqobo. Amakhukhi okusebenza ayadingeka ukuze uqiniseke ukuthi iwebhusayithi isebenza kahle. Lawo makhukhi abekwa njalo futhi ngeke asuswe uma unquma ukungawemukeli amakhukhi. Amakhukhi okusebenza awagcini idatha yomuntu siqu futhi aqukethe imininingwane ongayilandela. Amakhukhi okusebenza ngesibonelo asetshenziswa ukuze kubekwe imephu yendawo kusuka ku-Google Amamephu kuwebhusayithi. Lolu lwazi alwaziwa ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, Law & More ukhombisile ukuthi asabelana ngolwazi neGoogle nokuthi iGoogle kungenzeka isebenzise imininingwane abayithola ngewebhusayithi ngezinhloso zabo.
Law & More isebenzisa amakhukhi avela ku-Google Analytics ukuqapha ukusebenza kwabasebenzisi nezindlela ezijwayelekile kanye nokuthola imibiko. Ngale nqubo, idatha yomuntu siqu yabavakashi bewebhusayithi icutshungulwa ngokusebenzisa amakhukhi wokuhlaziya. Amakhukhi wokuhlaziya anika amandla Law & More ukukala ithrafikhi kuwebhusayithi. Lezi zibalo ziqinisekisa ukuthi Law & More uyakuqonda ukuthi isetshenziswa kangaki iwebhusayithi, yiluphi ulwazi izivakashi ezifunayo nokuthi yimaphi amakhasi kwiwebhusayithi abukwa kakhulu. Ngenxa yalokho, Law & More uyazi ukuthi iziphi izingxenye zewebhusayithi ezithandwayo futhi yimiphi imisebenzi edinga ukwenziwa ngcono. Ithrafikhi ekuwebhusayithi iyahlaziywa ukuze kuthuthukiswe iwebhusayithi nokwenza isipiliyoni sabavakashi bewebhusayithi sibe mnandi ngangokunokwenzeka. Izibalo eziqoqwe azilandeleleki kubantu futhi azaziwa ngangokunokwenzeka. Ngokusebenzisa i- Law & More amawebhusayithi, uyavuma ukucubungulwa kwemininingwane yakho yomuntu nge-Google ngendlela nangezinhloso ezichazwe ngenhla. I-Google ingahlinzeka ngalolu lwazi kubantu besithathu uma i-Google ibophezelwe ngokomthetho ukukwenza noma kungenjalo njengoba izinkampani zangaphandle zicubungula imininingwane egameni le-Google.
Amakhukhi wokuhlanganiswa kwezindaba zokuxhumana
Law & More futhi isebenzisa amakhukhi ukunika amandla ukuhlanganiswa kwemidiya yomphakathi. Iwebhusayithi iqukethe izixhumanisi zokuxhumana nomphakathi i-Facebook, Instagram, Twitter kanye ne-LinkedIn. Lezi zixhumanisi zenza ukuthi kube nokwabelana noma ukukhuthaza amakhasi kulawo matanethi. Ikhodi edingekayo ukuze uqaphele lezi zixhumanisi uthunyelwa Facebook, Instagram, Twitter kanye LinkedIn ngokwabo. Phakathi kokunye, la makhodi abeka ikhukhi. Lokhu kuvumela amanethiwekhi wokuxhumana nomphakathi ukukubona lapho ungena kuleyo nkundla yokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, imininingwane ephathelene namakhasi owabelana ngawo iyaqoqwa. Law & More ayinawo umthelela ekubekeni nasekusetshenzisweni kwamakhekhe yilabo bantu besithathu. Ngeminye imininingwane ngemininingwane eqoqwe yizingosi zokuxhumana nabantu, Law & More kubhekiswa kuzitatimende zobumfihlo ze-Facebook, Instagram, Twitter kanye ne-LinkedIn.
Uma ungafuni Law & More ukugcina amakhukhi ngewebhusayithi, ungavimbela ukwamukelwa kwama-cookies kuzilungiselelo zakho zesiphequluli. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amakhukhi awasagcinwa. Kodwa-ke, ngaphandle kwamakhukhi, eminye imisebenzi yewebhusayithi kungenzeka isebenze kahle noma ingahle ingasebenzi nakancane. Njengoba amakhukhi agcinwe kwikhompyuter yakho, ungazisusa wena. Ukuze wenze njalo, kufanele ubheke incwadi esipheqululini sakho.